Messenger တစ်ခု၊ IM & SMS အားလုံး APK တစ်ခုမှ Android ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » တဦးတည်းအတွက်တဦးတည်း, အားလုံးထားတဲ့ IM & SMS ကိုအတွက်သံတမန်တို့ကို
တဦးတည်း, တဦးတည်း APK ကိုအားလုံးထားတဲ့ IM & SMS ကိုအတွက်သံတမန်တို့ကို
တမန်တို့ကို, အားလုံးထားတဲ့ IM & တဦးတည်းအတွက် SMS ကိုသင်တို့ရှိသမျှကိုသင့်တမန် Apps ကပ manage ကိုကူညီနိုငျကလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူယခုရုံတစျခုက App အတွက်သင့်မိသားစု, သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ chat နိုငျပါသညျ! အဘယ်သူမျှမကပိုလူမှုရေး app များကိုရှာဖွေနေ, ငါတို့သည်သင်တို့ကမ္ဘာတစ်ခု access ကိုငါပေးမည်။
တဦးတည်းက App အတွက်ကိုအကုန်အသံတမန်တို့ကို
တဦးတည်းက App အားလုံးကိုသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသည်, မရှိတော့အလွယ်တကူသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစာပို့ & chat, ကွဲပြားခြားနားသော Apps ကပအတွက် switching ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်ကောင်းသော & လူကြိုက်များလူမှုမီဒီယာ Apps ကပ၏ဝင်ပေါက်ကမ်းလှမ်း, ဤကဲ့သို့သောပိုမိုအဆင်ပြေဖြစ်ဘယ်တော့မှ communicate ။
-Quick လက်လှမ်း & သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်:
သင့်ရဲ့ဘက်ထရီ & သိုလှောင်မှု -Save:
ပိုမိုလွယ်ကူ chat လုပ်ရှိသမျှကိုသင်၏လူမှုရေး Apps ကပပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်။
တဦးတည်းအတွက် Messenger ကိုအတူ, သင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများကမက်ဆေ့ခ်ျကိုရှိချင်အခါတိုင်း, သင်ရုံသင့်ရဲ့ messenger ကို app ကိုဖွင့်လှစ် click တစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် App ကိုအများဆုံးအသုံးပြု messenger ကို app ကိုရှာတွေ့, သငျသညျအသီးအသီး messenger ကို app ၏ပွင့်လင်းကြိမ်ပြသပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမကပိုယခု မှစ. လူမှုရေးတမန် Apps ကပရှာဖွေနေ!
Messenger ကို Lite ကိုအားလုံးတဦးတည်းမက်ဆေ့ခ်ျ Android အတွက် App ကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးတမန်, လူမှုရေးမီဒီယာ & ဆက်သွယ်ရေး app များကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူလွယ်ကူစွာဒီ App ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုရနိုငျသညျ! တောင်မှပိုကောင်းကအခမဲ့အဘို့အဖွင့်သည်။ ဒါဟာအစတစ်နေရာတည်းတွင်သင်၏သံတမန်တို့အားလုံးချပြီးအားဖြင့်သင့်အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်, ထို့ကြောင့်သင်ကိုချစ်လူတို့နှင့်အတူထိတွေ့စောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်ပိုမိုရရှိခဲ့သည်။
Messenger ကို Lite ကို Get, တစ်နေရာတည်းကနေအားလုံးသင်၏လူမှု Apps ကပရယူသုံးပါ။
တဦးတည်းအတွက်တဦးတည်း, အားလုံးထားတဲ့ IM & SMS ကိုအတွက်သံတမန်တို့ကို
12.55 ကို MB
Micky Group မှ